UFrancisca Aguirre uyafa. Imibongo emi-4 kwimemori yakho | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Izaziso, Imibongo
Ifoto yoqobo: (c) La Razón.
Imbongi yeAlicante UFrancisca Aguirre, eyaziwa njenge Paca Aguirre, Usweleke eMadrid eneminyaka engama-88 iminyaka. Yeyinto ebizwa ngokuba yi- «esinye isizukulwana sama-50s», Ngaba wayengomnye wababhali abambalwa ababesasebenza. Isimboli, ubunzulu, ubunzulu kodwa kunye nokubhiyozela ubomi, ukusondelelana, umnqweno nothando Yenza umsebenzi wokunakanwa kade, kodwa ufaneleke ngawo ngokufanelekileyo. Zezi 4 yemibongo yakhe endikubonisayo.
1 UFrancisca Aguirre
2.2 Ikhephu lokugqibela
2.3 Ingqina elikhethekileyo
2.4 Ixesha elide
Wayeyintombi yokupeyinta U-Lorenzo Aguirre kwaye wayetshatile UFeliksi Grande, enye imbongi ebalulekileyo, awayenaye intombi ikwangumbongi, IGuadalupe Grande.
Kuthathe ixesha elide ukupapasha kwaye kwaqwalaselwa kakhulu Impembelelo ka-Antonio Machado malunga nenkqubo yokuyilwa koncwadi, ekufuneka ibe Ukubonakalisa ubukho bomntu ngaphezulu kwalo msebenzi wokuyila. Impembelelo kaMachadad yayiyeyona nto yagqama kakhulu esakufumana Ibhaso loNcwadi kuZwelonke kunyaka ophelileyo
Kwimisebenzi yakhe eyaziwa kakhulu kwaye efanelekileyo, kufanele kuqatshelwe Ithaca, uwongwe nge ULeopoldo Panero wemibongo. Kunye Imbali ye-anatomy uyifumene Imbasa yeSizwe yeMibongo ngo-2011.
Kwaye ngubani owakhe waya eIthaca?
Ngubani ongayazi i-panorama yayo ebukhali,
isangqa solwandle esilucinezelayo,
ubuhlobo obusondeleyo obubeka kuthi,
ukuthula okungathethekiyo okusilandelayo?
I-Ithaca isishwankathela njengencwadi,
uhamba nathi ukuya kuthi,
isityhilela isandi sokulinda.
Kuba izandi zokulinda:
igcina isitsho amazwi aphelile.
I-Ithaca iyasigxeka ukubetha kwentliziyo yobomi,
kusenza sihambisane nomgama,
abalindi abaziimfama bendlela
yintoni eyenziwayo ngaphandle kwethu,
esingasokuze sikwazi ukulibala kuba
akukho ukulibala ngenxa yokungazi.
Kubuhlungu ukuvuka ngenye imini
kwaye ucamngce ulwandle olusigubungeleyo,
osithambisa ngetyuwa, asibhaptize njengabantwana abatsha.
Sikhumbula iintsuku zewayini ekwabelwana ngayo
amagama, hayi isandi;
izandla, hayi isenzo sokunkcenkceshela.
Ndibona ulwandle olundirhangqileyo,
i-bum eluhlaza olahlekileyo,
Ndijonga ihorizon xa ndibawa uphelile,
Ndishiya amehlo okomzuzwana
azalisekise iofisi yakhe entle;
ndiye ndabuya umva
kwaye ndalathisa amanyathelo am ndisiya eIthaca.
KuPedro García Domínguez
Kuhamba ubuxoki obuhle,
Uyazi kuphela ukuba bathini ngaye
zeziphi iincwadi eziyimfihlakalo ezikucacisela zona
ebalisa ibali elimnandi
ngamazwi azele intsingiselo,
egcwele ukucaca ngqo kunye nobunzima,
kwaye awuyiqondi nangona kunjalo.
Kodwa ukholo lwakho luyakusindisa, luyakugcina.
Ubuxoki obuhle bukujongile
nangona engakuboni, kwaye uyazi.
Uyayazi ngale ndlela ingenakuchazeka
apho siyazi eyona nto isonzakalisayo.
Imvula isuka esibhakabhakeni ixesha kunye nesithunzi,
kuyanetha ngobumsulwa kunye nentlungu ephambeneyo.
Umlilo wezithunzi uyakukhanyisa,
ngelixa ikhephu licima iinkwenkwezi
awayekade engumbane osisigxina.
Kuhamba ubuxoki obuhle;
kwizigidi ezingapheliyo zeminyaka yokukhanya,
ihambelana kwaye inemfesane, ikhephu lisasazeka.
Ulwandle, ulwandle yinto endiyifunayo.
Ulwandle kwaye akukho nto yimbi, akukho nto yimbi.
Eminye incinci, ayonelanga, ihlwempu.
Hayi intaba, umlambo, isibhakabhaka.
Hayi, akukho nto,
Andifuni ntyatyambo, izandla nazo,
hayi intliziyo yokundithuthuzela.
ukutshintshela enye intliziyo.
Andifuni bathethe nam ngothando
Ndifuna ulwandle kuphela:
Ndifuna nje ulwandle.
uhlamba ntoni intliziyo yam
kwaye uyishiye kunxweme lwayo
Ukutyhalwa ngamaza alo,
Ukukhothwa ngolwimi lwetyuwa
Ulwandle, ulwandle oluza kuba yinxalenye ye.
Ulwandle ukuxelela yonke into.
Ulwandle, ndikholelwe, ndifuna ulwandle,
ulwandle apho ulwandle lukhala khona
kwaye akukho mntu uqaphele.
KuNati noJorge Riechmann
Ndikhumbula kanye xa ndandisengumntwana
Kwakubonakala kum ukuba umhlaba uyintlango.
Iintaka zazisishiyile ngonaphakade:
nolwandle alusekho endaweni yalo;
Ingathi liphupha elingalunganga
Ndiyazi ukuba kanye xa ndandisengumntwana
umhlaba wawungcwaba, umgodi omkhulu,
isinki esigwinye ubomi,
ifanele elathi lasaba ngayo ikamva.
Kuyinyani ukuba kanye, apho, ebuntwaneni,
Ndeva kuthula ngathi sisandi sentlabathi.
Imiphefumlo, imilambo kunye neetempile zam zazithe cwaka,
igazi lam layeka, ngokungathi ngequbuliso,
Ngaphandle kokuqonda ukuba kutheni, ngebendicimile.
Kwaye umhlaba uhambile, kwasala mna kuphela:
ukumangaliswa okubuhlungu njengokufa okulusizi,
ubungqindilili, ubumanzi, bunamathele.
Nentiyo eyoyikisayo, ingqumbo yokubulala
ukuba, isiguli, wenyuka waya esifubeni,
wafikelela emazinyweni, wawenza ukuba abe nokutshixiza.
Kuyinyani, kwakudala, xa yonke into yaqala,
xa ihlabathi lalinobukhulu bomntu,
kwaye bendiqinisekile ukuba ngenye imini utata uzobuya
kwaye ngelixa wayecula phambi kwe-easel yakhe
Iinqanawa zaziza kuma kwizibuko
kwaye inyanga yayiza kuphuma ngobuso bayo bukhrim.
Kodwa akazange abuye.
Kuphela yimizobo yakhe eseleyo,
imbonakalo yelizwe, amaphenyane,
ukukhanya kweMeditera okwakusebrashi yakhe
kunye nentombazana elinde kwi-pier ekude
kunye nomfazi owaziyo ukuba abafileyo abafi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Izaziso » UFrancisca Aguirre uyafa. 4 imibongo kwimemori yakho
Imyuziyam yasePrado ijika iminyaka engama-200 ubudala. Iincwadi ezi-7 ngaye.